Ku Xidh Si Aad U Horjoogsato Kheyraadka Abaabulka Dutchtown • DutchtownSTL.org
Ku Xidh Si Aad U Horjoogsato Kheyraadka Abaabulka
Iyada oo qayb ka ah dadaallada aan ku horumarinayno joojinta abaabulka magaalada Dutchtown, waxaan ururinay ilo aan u adeegsanno adiga iyo deriskaaga dhismo ahaan.
Tabaruceyaasha leh DT2 waxay ka caawiyaan dhacdooyinka sida Habeenada Filimka Dutchtown, lacag ururiyayaal, saacado farxadeed oo ganacsi, iyo inbadan. Baro hadafka DT2 ee Dutchtownstl.org/dt2.
Tabaruceyaashu waxay la shaqeeyaan UrbanMain si ay u siiyaan caawimaad maamul Maareeyaha Kobcinta Dutchtown iyagoo dadaal ugu jira inay gacan ka geystaan ​​hirgelinta Xiriirka Wadada Weyn ee Missouri'4' 1 habka loo maro:
Nadiif nadiif ah oo cagaaran
Wax badan ka baro dutchtownstl.org/urbanmain.
Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown
Xarunta 'Dutchtown CID' waa degmo canshuur gaar ah oo ka kooban qaybo ka mid ah jidadka waaweyn ee Dutchtown (South Grand, Meramec, iyo Virginia). In kasta oo doolarka canshuuraha ay tahay in lagu bixiyo gudaha degmada, haddana howlaha CID-da waa inay hagaajiso xaafadda guud ahaan. Eeg waxa ka socda xarunta dambi baarista ee CID Dutchtownstl.org/cid.
Isbahaysiga Cadaaladda ee Dutchtown
Isbahaysiga Cadaaladda ee Dutchtown wuxuu diiradda saarayaa keenista sinnaanta magaalada Dutchtown iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta oo ay ku jiraan waxbarashada cod-bixiyeyaasha, musharraxa iyo arrimaha waxbarashada, iyo ficillada sinnaanta. Raac Isbahaysiga Cadaaladda ee Dutchtown ee Facebook.
DutchtownSTL waxay daabacdaa nuxurka waxayna aruurisaa Khayraadka iyo macluumaadka kale iyo saamiyada iyada oo loo marayo DutchtownSTL.org, kanaalada warbaahinta bulshada, iyo goobo kale.
Guddiyada Dutchtown waxay toos u toosiyaan tallada bulshada iyo waxqabadyada ka socda Dutchtown. Guddiyada waxaa ka mid ah Naqshadeynta, Mudnaanta Dhaqaalaha, Dhiirrigelinta, Abaabulka, iyo Nadiif Nadiif & Cagaar Wixii intaas ka badan ka raadi oo iska qor dutchtownstl.org/committees.
DSCC waxay kobcinaysaa muhiimadda xaafadda ee magaalada Dutchtown iyada oo loo marayo xoojinta bulshada, xasilinta guryaha, iyo mas'uuliyadda horumarinta guryaha. Booqasho Dutchtownsouth.org si aad wax badan ka bartaan.
Gargaarka Mutual Dutchtown
Qayb ka mid ah Kaalmaynta Mutadawalka ee STL, shabakad abaabulayaal, bogsiiyayaal, farshaxanno, hoggaamiyeyaasha bulshada, iyo maalin kasta dadku way isu yimaadaan si ay ugu xirmaan dadka u baahan deriskooda.
Ururo iyo Adeegyo kale
Xiriirka Ururka Magaalada ee Qaybaha Xannibaadaha
The Isutagga Qeybaha Xirmooyinka waxay u heellan tahay caawinta dadka deggan bulshada St. Kaaliye ka tirsan Ururka Magaalada illaa 1932, Federaalku waa ururkii ugu da'da weynaa ee is-caawiya ee aasaasiga ah ee aagga St. Louis.
The Ururka St.Louis ee Ururada Bulshada waa midow ay ku midoobeen ururo jaaliyadeed oo kala duwan dhamaan magaalada St.
The CSB waa xarunta nadiifinta ee St. Louis ee maaraynta arrimaha inta badan adeegyada magaalada. Akhriso kaayaga tilmaamaha Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta.
Farxad ujeedadeeduna tahay in lagu hagaajiyo tayada nolosha ee magaalada St. Louis iyadoo la wacyigalinayo, laga qaybgelinayo lana dhiirrigelinayo derisyada sidii gobolkeennu u noqon lahaa mid nadiif ah, cagaaran, oo deegaan ahaan waara. La shaqee Brightside si aad u abaabusho taada nadiifinta xaafadda.
Our tilmaamaha Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta wuxuu ku bari doonaa sida loo soo sheego arrimaha qashinka, jidadka, guryaha dhibaatooyinka, iyo waxyaabo kale oo badan. Baro sida loo xareeyo warbixinta CSB khadka tooska ah ama taleefanka.
Boliiska: Yuu yahay, Halkee, iyo Goorma La Wacayo
Baro sida loo soo sheego dambiyada iyo arrimaha kale ee ka jira hanuuniyo ka wada hadalka qaababka loola xiriiro booliska iyo sahaminta waxyaabo kale oo lagu heli karo duruufaha qaarkood.
Wax ka baro doorka Takhasuslaha Horumarinta Xaafadaha, xiriiriyaha ka dhexeeya muwaadiniinta iyo adeegyada magaalada, ee ku saabsan annaga hagitaan qoto dheer oo ku saabsan NIS.
DutchtownSTL waxay aruurineysaa ilo waxayna abuureysaa hageyaal ka caawiya ganacsiyada cusub iyo kuwa aasaasiga ah ee Dutchtown inay guuleystaan. Booqasho dutchtownstl.org/business si loo arko sida aan u caawin karno.
Dukaan hal-joog ah oo laga helo macluumaadka xiriirka. La xiriir saraakiisha la soo doortay, shirkadaha korontada, adeegyada aan degdegga ahayn, iyo inbadan. Calaamadeyso dutchtownstl.org/resources tilmaan-bixin tixraac leh.
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay Nofeembar 22nd, 2020 .
DutchtownSTL.org Abaabul Balooggaaga! Ku Xidh Si Aad U Horjoogsato Kheyraadka Abaabulka